Nandrolone Decanoate Isticmaalaan, Cycle, Qiyaasta, iyo Natiijooyinka Waajibka
Ma waxaad xiiseyneysaa in aad haysato jirka dilaaga ah ee qof walboo daaliya? Inkastoo cunista saxda ah iyo aadida jimicsiga ma ahan mid ku filan, qaadashada steroid anabolic xaqiiqdii waa wax soo saar badan intii aad ka fikirtay. Maanta waxaan u socdaa inaan kuu sheego Nandrolone Decanoate, Wareegga Deca Durabolin, Qiyaasta Nandrolone Decanoate, Nandrolone Decanoate wuxuu isticmaalaa, Dib u eegista Nandrolone Decanoate iyo dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka ah ee ku saabsan daroogada weyn. Mar dambe uma baahnid inaad weydiiso 'ninka weyn' ee jimicsigaaga waxa uu isticmaalayo; waan kuu helnay.
Waxaan nahay Buyaas.com, bog internetka ah oo aad ka iibsan karto Nandrolone Decanoate online. Noqoshada shirkad China ah oo ku takhasustay soo saarista, suuq-geynta, iyo qaybinta steroids anabolic, weligaa ma iibso Nandrolone Decanoate. Ma aha oo keliya inaan kuu balan qaadno qiimaha ugu fiican laakiin tayada alaabtayada ayaan lumin. Maxaa naga dhigaya inaan istaagno?
Guusha shirkadeena waxaa loo aaneynayaa tayada shaqaalaha shaqeeya. Iyadoo la dooranayo shaqaalaha ugu fiican ee naga shaqeynaya, waxaan u tagnaa kuwa ugu caansan meelaha ay ka mid yihiin. Sida buyaas.com waxaanu hubinnaa in aanu kobcinno horumarkooda iyaga oo bixinaya khibradda saxda ah. Sidoo kale, waxaan siinaa tababaro isdaba joog ah iyo qalab ku filan oo isgaadhsiin ah si loo ogaado dhibaatooyinkooda. Dhammaantood waxay kor u qaadaan wax-soo-saarkooda iyo niyaddooda.
Waxaanu bixinaa alaab tayo sare leh oo aad kalsooni ku qabsan karto. Markaad bilowdo qaadista steroidkeena, fursadaha waa inaad ogaan doontaa natiijooyinkaaga la rabay muddadii ugu gaaban. Intaa waxaa dheer, waxaan kuu xaqiijinaynaa in ay yihiin daahir iyo rabitaan, sidaas darteed, u adeegaan ujeedada. Ka fekeraya sida aan u guuleysaneyno? Waxaan isticmaalnaa qalabka tayada ugu fiican ee warshadaha. Taas oo aan ahayn, waxaan u hoggaansameynaa dhammaan heerarka iyo qawaaniinta la dejiyey si loo hubiyo in caafimaadkaaga uu ku jiro jeeg.
Si aan u hayno meel caafimaad leh, waanu ku dadaalnaa inaanu hubino in bay'adu nadiif tahay. Dhaqdhaqaaqyadeena oo dhan ma qallafiyaan bay'ada, sababtoo ah waxaan fahamsanahay muhiimadda ay leedahay in la sii wado ganacsiga guuleysta. Daryeelka macaamiisheena wuxuu leeyahay heer sare oo ka jawaab celin ah waxayna hubisaa in dhammaan macaamiisha ay helaan jawaabta saxda ah waqtiga saxda ah. Hagaha Guud ee Dianabol ee Jidh-dhiska
Dhammaan kuwan waa ciriiri barafka; nagula soo xiriir annaga si aad wax badan u aragto.
Waa maxay Nandrolone Decanoate(DECA)?
Haddii aad tahay jimicsi khibrad leh ama hiwaayad, waxaa laga yaabaa inaad maqashay astaamaha. Waxay yihiin jihada jirka jirka ee sii kordhiya masiibadaada iyo awooddaada waxayna kaa caawineysaa inaad gaarto tirada aad rabto. Mararka qaarkood waxaad dareemeysaa in jirkaaga uu gaadhay xadka laakiin inaad haysato taakulaynta saxda ah ayaa kaa caawin kara wax weyn. Laakiin waa maxay saxda ah ee saxda ah? Waa inaad miisaameysaa saameynta daawada iyo faa'iidooyinka si aad u go'aamisid midka ugu fiican ee aad ku habboon tahay. Nandrolone Decanoate (DECA) ayaa kaa caawin doonta inaad gaarto yoolalkaaga jirka iyada oo aanad udoonayn caafimaadkaaga.
Deca Durabolin (360-70-3) waa mid ka mid ah magacyada ugu caansan Nandrolone. Waxaa sidoo kale loo yaqaan sida DECA by kuwa jecel foomamka gaaban. Awooddii weynaa waxay ka dhigtey in ay u gudubto stabto anabolic loogu talagalay cayaaraha, tartanka fayadhowrka, iyo kuwa jirka adduunka maanta. Deca Durabolin waa steroid anabolic oo ku salaysan Nandrolone hormoon kaas oo si dabiici ah loo soo saaray jirka. Hase yeeshee, qadar yar ayaa laga helaa jirka marka loo eego hormoonnada kale sida Testosterone. Hawlaha ugu muhiimsan ee Nandrolone waa korniinka iyo horumarka jidhka bini'aadamka. Natiijo ahaan, waxay faa'iido u leedahay daaweynta xaaladaha daran ee Anemia.
Markaad qaadato Deca Durabolin, waxaad kordhisaa qadarka Nandrolone steroid ee nidaamka jirka. Sidaa awgeed, waxaa jira korriin muhiim ah oo ku yimaada unugyada muruqyada, xajinta nitrogen, tirada unugyada dhiigga ee cas iyo qaddarka hemoglobin. Dhammaan kuwan waxay u socdaan waddo dheer oo caawinaya kobaca unugyada muruqyada iyo dib u soo kabashada.
Nandrolone Decanoate (360-70-3) waxay sameeyaan wax kale oo steroid ah. The Nandrolone Duufaan cad ama cirbad la isku duro ama la qaato hal mar toddobaadkii, hase ahaatee waxay joogayaan nidaamka muddo dheer. Tani waa sababta oo ah waa xummad sii deyneysa. Xaqiiqada ah in qadar yar oo ka mid ah ay ku sii socoto in uu jirka ku shaqeeyo wakhti dheer wuxuu ka dhigayaa mid u qalma kuwa ku cusub adduunka. Tan iyo markii la ogaaday 1950s iyo horaantii 1960s, qof kasta oo ujeedadiisu tahay inuu qulqulaya wuxuu u jeedaa Nandrolone Decanoate. Si wadajir ah ula socota Dianabol iyo Testosterone, waxay isku dhejisaa khibrad fantastik ah oo lagu hagaajinayo muruqyada iyo koritaanka. Testosterone Cypionate: Wax kasta oo ah Jidhka jirka ah waa inuu Ogyahay
Waa mid si lamid ah u la mid ah Testosterone oo kaliya in ay jirto farqi yar oo ka jirta 19th atom. Waxaa laga yaabaa inaanay u muuqan sida farqi weyn, laakiin waa waxa ka soocaya astaamaha kale ee anabolic ee ku saabsan waxyeelada. Inkasta oo laysku daro steroid khafiif ah, waxay bixisaa waxkasta oo ka filan. Dad badan ayaa ku fashilmay awooddooda inay si wax ku ool ah u gubaan dufanka, kor u kaca murqaha, kor u qaadida tamarta, kordhiso heerka raysashada iyo tamarta jirka.
Qaar ka mid ah magacyada ganacsiga macaamiisha waa;
Mucjiso by Morbel
Daawooyinka Caalamiga ah Nandrolone Decanoate
Nandrolone Decanoate (Deca Durabolin) wuxuu isticmaalaa
Dhismaha jirka- Daawada ayaa si weyn loo tixgeliyaa ciyaartoyda, jirka, iyo qof kasta oo xiiseynaya inuu yeesho jirdhis wanaagsan sababtoo ah waxa uu yahay steroidska ugu wax ku oolka badan ee nabdoon. Maxaa ka dhigaya inay caan ka noqoto haweenka jidh-dhisayaasha ah inay tahay mid sahlan oo asaloji ah. Sidoo kale, waxay kaa caawineysaa inaad ku guulaysato feker adag oo aan adigoo si fudud u kariya. Mid kale oo ka mid ah muuqaalkiisa oo ka dhigaya midka steroid ee jecel waa inuusan u baahnayn maamul marmar ah sida steroids kale markaad ka qeyb qaadato wareegga.
Inkastoo steroidkani uu kicin karo muruqyada jirkaaga iyo kor u qaadista waxqabadka iyo dulqaadashada, waxaa wanaagsan in la ogaado in aad si adag u tababaraneyso oo aad ku jirtid cunto adag. Ma jiraan wax xayawaan ah oo xayeysiin ah iyo in aad hesho jimicsiga aad tahay inaad tababarka ku qaadato qolka jimicsiga ama meesha ugu haboon markaad ku jirto steroid. Nandrolone Decanoate ayaa xayiraadda bandhigga marka ay timaado tababarka ka badan iyada oo aan daal badan qabin halka isla markaa ay kor u qaadeyso muruqyada.
osteoporosis- Foosha oo daciifisa lafaha waa waxa loo yaqaan 'osteoporosis'. Xaaladdan waxaa lagu gartaa lafaha jilicsan si fudud oo u noqda mid jilicsan, gaar ahaan lafaha ee curcurka, dhabarka iyo sinta. Inkastoo dad badan oo qaba cudurkan, qaar badani ma ogaan karaan inay qabaan ilaa ay ka jabaan lafaha. Sababaha ugu horreeya ee keena cilladda laf dhabarta, waxay noqotaa haween Aasiya ama cadaan ah, qaadashada daawooyinka qaarkood, taariikhda qoyskooda ee lafdhabarta, dhuuban iyo yar yar iyo sii weynaantooda. Haddii aan la daaweyn, waxay kordhisaa halista laf-dhabarka iyo jabka. Waxyaabaha wanaagsani waa Nandrolone Decanoatehas wuxuu cadeeyey inuu maareynayo maadaama ay kordhiso cufaanka si tartiib ah. Sidaas daraadeed, waxay yaraynaysaa saameynta jirrada ee jirka.
Anemia- Awoodda jidhkaagu inuu qaado oksijiin ku filan qaybaha kala duwan ee jirkaaga ayaa waliba loo yaqaan 'anemia'. Mid ka mid ah Nandrolone Decanoate useis in uu kor u qaado wax soo saarka unugyada dhiigga ka dib taas oo u oggolaaneysa gaadiidka ogsijiinka oo dhan jirka. Haddii aad qabtid mid ka mid ah calaamadahan soo socda, waa inaad u tagtaa dhakhtar si loo go'aamiyo haddii xanuunkaagu uu ka yimaado dhiig-yaraan. Waxay yihiin; calaamadaha wadnaha, calaamadaha wadnaha wadnaha, qalqalaha kala duwan ee lugaha, xanuunka feeraha, maqaarka cirridka, qabow ee cagaha iyo gacmaha, madax-xanuun, madax-wareer, neefsasho gaaban, daal, iyo daciifnimo. Waxaa lagu daaweeyaa DECA, waxay ka dhici kartaa bilaha 3-6.
Xaaladaha Catabolic-Waa shuruud in la tababbarayo si xad dhaaf ah inta aan la qaadan nafaqooyinka ku filan gaar ahaan borotiinka. Marka xaaladdan lagu jiro, waxaad ku xanuunsan kartaa hurdo la'aan, murqo iyo murqo xanuun iyo daal aad u daran. Inta badan ma aha in dadku fahamsan yihiin in inta badan ee shaqeyntu ay ka caawiso iyaga inay dhisaan muruqyada iyaguna lumiyo tamar badan. Khasaare waa in la magdhabo adigoo haysta cunto sax ah oo leh carbohydrates ku filan iyo borotiinno ku filan. Maaddaama ay tahay hoormoon koritaan ah Nandrolone wuxuu dib u soo celiyaa xaaladda jirkiisa anabolic sidaas darteed dib u dhiska jirka ka dib waxqabadyo culus. Haddii aad tahay taageere fayow, miisaanka steroidshould wuxuu noqon karaa mid adag oo ku yaal safarkaaga si aad uga baxdo gobolka caasimadda.
Osteoarthritis-Waa qaabka ugu badan ee arthritis-ka waxaana laga yaabaa in uu hoos u dhigo dhaqdhaqaaq wadajir ah, barar, iyo xanuun. Dhamaan xiniinyaha waxay u nugul yihiin arrintan, laakiin badanaa waxay ku dhacdaa dhabarka, miskaha, jilbaha iyo gacmaha. Tan iyo markii ay ka dhigto xajmiga lugaha ee xirmooyinka, lafaha ayaa bilawga isku xoqaya si halis joogto ah uga yimaada xubnaha. Qandhada ayaa ah nudaha jilicsan ee ku wareegsan lafaha laf dhabarta ah isla markaana wuxuu sameeyaa nuugid shucaac ah. Xaaladdu waxay u horseedi kartaa lafaha lafaha, dareenka dareenka, luminta dabacsanaanta, qulqulista wadnaha, xanuunka, iyo xanuunka wadajirka. DECA waxay ka caawisaa dhimista xanuunka wadajirka ah iyo adkeynta adoo kor u qaadaya iskudhafka borotiinka.
Keli-kicinta- Bukaan-jiifka qaba cudurrada kalyaha ee joogtada ah oo laga yaabo in uu ku socdo sifeynta ayaa isticmaali kara Nandrolone Decanoate si kor loogu qaado tirada muruqa.
Kansarka naasaha- DECAwaxaa loo isticmaalaa daaweynta hoormoonka daaweynta kansarka sare ee naaska.
Yaanay isticmaalin Nandrolone Decanoate?
Xaaladaha hoos ku xusan waxay khatar u yihiin DECA. Ka hor intaadan isticmaalin, ka hubi dhakhtarkaaga haddii aad ku jirtid mid ka mid ah.
Naasnuujinta hooyada ama midka soo saaraya caanaha
Biyaha lagu arki karo
Xayiraadda socodka xitaa caadiga ah
Calaamadaha halista ah ee wadnaha oo aan shaqeynin
Qadar badan oo calcium ah oo ku jira dhiiggaaga
Kansarka qanjirka 'prostate'
Kansarka naasaha ee lagu ogaado bukaanka labka ah
Calcium dhiig oo sarreeya oo keena kansarka naasaha ee jirka
Qiyaasta Nandrolone Decanoate (Deca Durabolin)
Qaadashada qiyaasta saxda ah aad ayey muhiim u tahay daroogooyinka kasta ee aad qaadan kartid. Dad badan ayaa khaladka ku fekeraya in ay qaataan daawooyinka badankood waxay keeni karaan natiijooyin fiican laakiin dareen dhab ah, waxay keeneysaa fursad weyn oo ka dhalata dhibaatooyin daran. Qiyaasta hoose waa wax ka fiican; laguma siin doono natiijooyinkaaga ku habboon oo waxay noqon doontaa lacag qashin ah.
Uma baahnid tone of this steroid si aad u aragto natiijooyin wanaagsan; waxaa lagula talinayaa in aad isticmaasho 2mg / lb oo ah miisaanka jirka ee caatada ah hal todobaad kasta. Sidee baad ku ogaan kartaa culeyska jirka ee caatada ah? Waa miisaanka jidhkaaga ee laga yareeyo dufanka. Tusaale ahaan, haddii aad miisaanto 200lbs oo aad haysatid dufanka 20%, markaa LBM ayaa noqon doonta 180 lb. Ultimate Hagaha Stanozolol (Winstrol) ee Bodybuilding
180lb x 2 = 360mg of daroogada this toddobaadkii.
Haddii aanad ogeyn LBM-gaaga, waxaad ka fakari kartaa inaad iibsato baqshad yar.
Waqtiga natiijada Deca Durabolin waa laga bilaabo usbuuca koowaad ilaa usbuuca afaraad. Si kastaba ha noqotee, marmarka qaarkood waxay qaadan kartaa ilaa siddeed toddobaad si ay u bilaabaan natiijooyinka. Macnaheedu waa in la arko natiijooyinka ugu sarreeya Nandrolone Decanoate; wareeggaagu waa inuu ka badan yahay siddeed toddobaad.
Haddii aad ku jirto heer sare Nandrolone Decanoate Dosage, Tusaale ahaan, mg-400-600 mg toddobaadkii, ka dibna waa kuu haboon tahay inaad qaadato toddobaadka toddobaad ee 12-16. Dhinaca kale, haddii aad u hoggaansanto xeerka 2mg / lean ee cufka jirka ama ka yar tan, waxaad qaadan kartaa ilaa labaatan iyo labaatan iyo lix toddobaad walina wali waa fiicantahay.
Tan iyo markii ay DECA wuxuu ka helaa jacayl ka badan haweenka jir-dhiseyaasha, waxaa wanaagsan in la ogaado inaysan u baahnayn in ay qaataan xaddi badan sida raga. Waxaa la yaab leh, iyada oo qiyaasta Nandrolone Decanoate qiyaastii 50mg usbuuc kasta waxay siin doontaa iyaga oo jidh-dil u ah oo noqon doona xaasid.
Marka loo isticmaalo sida daroogada caafimaadka, qiyaasta Nandrolone Decanoate qiyaasta waa 50-100mg toddobaadyada 3-4. Dadka qaba cudurrada muruqyada iyo culeyska miisaanka, xaddiga 100-200mg wiigii ayaa la qoray.
Ogsoonow in xataa haddii Nandrolone Decanoate ma ahan shan jeer in yareyn kara heerka qiyaasta estrogen marka la barbardhigo steroids kale, waxaa lagula talinayaa in aad qaadatid xannibaadaha estrogen si loo yareeyo suurtagalnimada in taasi dhacdo. Qaar ka mid ah xannibaadayaasha aad isticmaali kartid waa Arimidex 1mg saddex toddobaad ama Aromasin 12.5mg maalin walba.
Nandrolone Decanoate (Deca Durabolin) wareegga
Inta lagu jiro marxaladda xajmiga, waxaad qaadan kartaa Nandrolone Decanoate si loo kordhiyo xajmiga muruqa. Waxaad mar walba ku xisaabtami kartaa haddii ujeedadu tahay inaad ku xirto muruqaas. Saameynta xajinta waxay qaadan kartaa qiyaastii 12 toddobaad iyada oo la isticmaalayo qiyaasta DECA ee ku saabsan 400mg toddobaadkii.
Marxaladda dhimista waxaa ka mid ah daadinta miisaanka oo isku dayaysa in ay noqoto mid liidata. Qadarka caadiga ah ee waqtiga uu qaadanaayo waa toddobaadyada 12-16. Tan iyo Deca Durabolin ma kobcinayaan baruurta, waxaa kaliya loo isticmaali karaa in lagu ilaaliyo xajinta murqaha oo dhan marxaladda jarista.
Mid ka mid ah wejiyada kuwa jidhka sameeya sida waa isticmaalka isku-darka Testosterone Cypionate iyo Nandrolone Decanoate. Inkasta oo labadoodaba lagu magacaabo steroids khafiif ah, natiijooyinkooda waxay cagahaaga kaa saari doonaan. Faa'iidada Nandrolone Decanoate wareegga ah waa in aysan kordhin oo keliya kor u kaca muruqyada laakiin sidoo kale adkeeyaa muruqyada iyada oo aan la kordhin heerarka estrogenic.
Wejiga labaad ee aynu ka hadli doonno waa isku dhafka Nandrolone Decanoate, Cypionate testosterone, Iyo Dianabol. Farqiga u dhexeeya middan iyo tusaalihii ugu horreeyay waa in lagu daro Dianabol oo ka dhigaysa mid culus. Inkasta oo aad doonayso inaad ku darto tiro muruq badan, waxaad u badan tahay inaad ku dhacdo waxyeelo isdaba-joog ah.
Halkan waxaa ah tusaale tusaale ah qiyaasta qiyaasta daawada Testosterone, Dianabol iyo wareega Durabolin.
Week Cypionate testosterone Dianabol Nandrolone Decanoate (Deca Durabolin)
1 600mgs / toddobaad 50mgs maalintii 400mgs toddobaadkii
2 600mgs / toddobaad 50mgs maalintii 400mgs toddobaadkii
3 600mgs / toddobaad 50mgs maalintii 400mgs toddobaadkii
4 600mgs / toddobaad 50mgs maalintii 400mgs toddobaadkii
5 600mgs / toddobaad 50mgs maalintii 400mgs toddobaadkii
6 600mgs / toddobaad 50mgs maalintii 400mgs toddobaadkii
7 600mgs / toddobaad Off 400mgs toddobaadkii
8 600mgs / toddobaad Off 400mgs toddobaadkii
9 600mgs / toddobaad Off 400mgs toddobaadkii
10 600mgs / toddobaad Off 400mgs toddobaadkii
11 600mgs / toddobaad Off 400mgs toddobaadkii
12 600mgs / toddobaad Off 400mgs toddobaadkii
Nandrolone Dib u habeyn Daaweeynta Dabiiciga ah
Wixii Nandrolone Decanoate si aad u shaqeyso, jidhkaaga waa inaad naftaada ka fikirto inaysan u baahnayn in la keeno testosterone. Sidaa awgeed, waxay hoos u dhigi kartaa heerarka testosterone jirkaada iyadoo la marayo 70%.
Markaad joojiso isticmaalka stero-ka-dillaac, waxay noqon kartaa Qaado jidhkaaga 2-6 ka hor intaan la qaadin testosterone heer caadi ah. Sababta daaweynta ka dib ayaa sabab u ah, muddadan, jirkaagu wuxuu soo saari doonaa 30% kaliya ee testosterone. Haddii aadan haysanin daaweynta wareegga dambe, waxay u horseedi kartaa isbeddelo aan loo baahnayn oo ka mid ah jirka sida ragga sida dumarka ah.
Nasiib wanaag waxaa jira hab lagu joojiyo arrintan. Ka dib marka lagugu sameeyo qiyaasta "Nandrolone Decanoate", waa inaad sugto laba toddobaad oo aad bilowdo isticmaalka 50mg ee Clomid maalin saddex toddobaad. Sameynta tani waa mid aad u faa'iido leh, maxaa yeelay waxay kicineysaa marxaladda jirka ee testosterone jirka mar kale.
Natiijooyinka Nandrolone Decanoate (Deca Durabolin)
Nandrolone Decanoate waqti waxay ka bilaabantaa usbuuca ugu horeysa ilaa iyo toddobaadkii siddeedaad. Waxay ka duwan tahay qof qof kale, laakiin haddii aad rabto inaad xakameyso natiijooyinka, waa inaad cuntaa mid sax ah oo aad uga shaqeyso.
Dad badan oo isticmaalay Deca Durabolin, waxay heleen 15lbs muruqa intii lagu jiray wareegga toddobaad ee 20-26.
Nandrolone Decanoate waxyeelo maaha sida daran sida kuwa kale ee keena steroids kale. Waa kuwo la maamuli karo, laakiin haddii ay ka baxdo gacanta, marwalba laguma talin inaad aragto dhakhtar.
Niyad jabka- Iyagoo niyadjabaya sida ay u muuqdaan, waxaa jira siyaabo aad uga hortagi karto arrintan. Waxyaabaha aad sameyn kartid waxay ka qayb qaadanayaan dhaqdhaqaaq jir ahaan sida dabaasha, orodka, socodka ama xataa xitaa yoga.
Dheef la'aan -Waxaa laga yaabaa inay sababto isticmaalka qadar aad u sarreeya daroogadan. Haddii ay dhacdo, yareyso qaadashadaada. Haddii uu daran yahay, raadi dareenka dhakhtar.
Ginecomastia- Macaamiisha ragga ah ayaa wax laga qaban karaa iyada oo la isticmaalayo cunno cunto haboon. Sidoo kale, iska ilaali hab-nololeed aan caafimaad qabin adoo cunaya dufan badan iyo cuntooyin la warshadeeyay. Waxaad sidoo kale iibsan kartaa kiriimyada naaska sida gynexol kuwaas oo ka caawiya muruqyada xabadkaaga.
Heerarka kolesteroolkaMarkasta qaado cunto caafimaad leh si loo yareeyo heerarka kolestaroolka jirkaada. Waxyaabaha kale ee aad sameyn kartid waa inaad ku darto borotiinka caanaha ee cuntadaada.
Baadhitaanka-U tag dhakhtar haddii aad dareentid in aad sameyso cod qoto dheer ama dumar ah.
Diidmada wax soo saarka testosterone- Ka dib marka lagu dhammeeyo isticmaalka Nandrolone Decanoate, qaado Clomid si kor loogu qaado wax soo saarka testosterone.
Kobaca timaha jirka-Haddii ay sidani dhacdo, waxaad ku cusbayn kartaa timaha aan loo baahnayn, isticmaal shukulaatada timaha ama aad u tagto electrolysis si aad uga saarto qaybo yar oo jirka ah oo koray.
Timaha luminta -Tani waxay inta badan saameysaa kuwa u nugul xajmiga. Si aad ula macaamilato, waxaa lagu dhajin karaa maqaarkaaga saliidaha lagama maarmaanka ah ee timaha ku sameeya. Waxaad sidoo kale tixgelin kartaa inaad qaadatid fitamiino yareeya timo lumis.
Acne- Marka aad aragto xoogaa finan xanuun ah oo wejigaaga ah, waa inaanad culays saarin. Iska ilaali kareemka mariinka si aad u daaweyso mar walbana u nadiifi wajigaaga.
Nandrolone Decanoate (Deca Durabolin) nus nool
Nandrolone Decanoate (360-70-3) nus-nololeed qiyaastii lix ilaa sideed maalmood. Si kastaba ha noqotee, waxay qaadaneysaa ilaa iyo labaatan maalmood si looga saaro jirka.
Gargaarka Nandrolone Decanoate (Deca Durabolin)
Nandrolone Decanoate (360-70-3) waa steroid si ay u tagto sababtoo ah faa'iidooyinka badan ee ay keento board. Waxay yihiin;
Cufnaanta lafaha Ever tan iyo markiidecanoate waxaa lagu soo bandhigay suuqa, mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu weyn ee ay bixiso waa dhiirigelinta lafaha caafimaad iyo kalagoysyada. Isku-dhafka iyo jidhkeena waxaa lagu daboolaa dhar iyo jeexasho marka aynu waynno. Nasiib-wanaag, isticmaalka steroid-ka deca-ku wuxuu si fiican u tirin karaa.
Ciyaartoyda iyo jir-dhiseyaashu waxay u nugul yihiin dhibaatooyinka lafaha iyo wadajirka ah sababtoo ah jidh-dhisayaasha waxay culeyska ka qaadaan dadka kale inta ay cayaartooydu ku hawlan yihiin hawlo badan oo jireed. Goobaha cayaaraha waxay ku soo boodaan naxdin badan waxayna galaan ciqaabo badan inta ay ku qaataan dhaqdhaqaaqooda maalin kasta. Si aad u tiraahdo dhammaan lafaha xooggan ayaa ku siin doona qaab adag.
Kobaca rabbaanida- Haddii aad ku jirto marxaladda qashin-qaadashada ama aad ku adkaato adkeynta xajmiga kalooriga, markaa waa inaad ka fekertaa inaad ka mid noqoto Nandrolone Decanoateto kordhinta rabitaanka cuntada.
DECA wuxuu kaa caawin doonaa sidan oo ku siinaysa fursad aad ku riixdo nafaqooyin badan iyo kalooro ku filan intii aad awoodo. Waxa lagaa rabo inaad ogaatid waa inaad u isticmaashid wax badan oo ka mid ah waxa kugu dhejiya adiga oo aan kordhin xaddiga dufanka jirkaaga. In badan oo cunnooyin caafimaad leh ayaa ka caawin doona culeyska culeyska culus, qeexida murqaha, iyo guulo xoog leh. Nandrolone sidaa darteed, waxay kaa caawineysaa inaad haysato rabitaanka cuntada oo kugu filan si aad u qaadato cunto ku filan oo dabooli karta baahiyaha kalooriyada ee ujeedooyinka jidhkaaga.
Kordhinta wax soo saarka unugyada dhiigga cas -Haddii aad ka fekereyso sida wax soo saarka unugyada dhiigga cas cas oo saameeya safarkaaga jirka, waxaan kuu sheegi doonaa sida. Unugyada dhiigga ee guduudan oo dheeraad ah macnahoodu waa in oksijiin badan la keeno murqaha jirka oo dhan. Natiijada, tani waxay kordhisaa wax soo saarkaaga wax-qabadka, sidaa darteed waad awoodi kartaan inaad tabarucdid oo aad kasbato.
Kororka murqaha murqaha- Faa'iidada tan waxay tahay in ay jirto miisaaniyad heer sare ah oo ka dhalata muruqyada waawayn muddo gaaban. Iyada oo la kordhiyo wax soo saarka IGF-1, hormoon oo ku dhow inuu la mid yahay insulin iyo in uu door muhiim ah ka ciyaaro muruqyada, maskaxda ayaa ku siin doonta murqaha sida kuwa ka mid ah Superman.
Toxicity beerka hooseeya - Nandrolone Decanoateposes saameyn yar ee beerka marka loo eego steroids kale. Xaqiiqda ah in beerka si kale loo jajabiyey ayaa yareynaya saameynta xun ee ay ku leedahay beerka.
Kala-beddelka loo yaqaan 'estrogen' ayaa aad u hooseeya marka loo eego inta badan steroids- Si ka duwan noocyada steroids ee suuqyada, DECAconcracts estrogen ayaa si tartiib tartiib ah hoos u dhigaya saamaynta daawada ee la yimaada.
Waqtiyada soo kabashada ee la hagaajiyay- Waxay macnaheedu tahay in aad sameyn kartid mugga sare ee shaqada oo aad si dhakhso ah u soo kabato. Tani waa sababta oo ah staoid steroidisreases dejinta nitrogen / synthesis protein. Marka ay dhiirrigeliso maqaarka kollagen, dhammaan jiirka, jilicsanaanta, iyo maqaarku waxay dayactiraan oo ay dib u soo kabtaan. Xitaa xiiso dheeraad ah, daraasaduhu waxay muujinayaan in DECA ay labalaabi karto soo-saarka kolajka ee jirka. Soo kabashada degdegga ah waa mid aad muhiim u ah jirka jirka iyo ciyaartoyda raba inay riixaan xuduudaha. Marka ay tagaan qolka jimicsiga ama ka qaybqaataan shaqooyinka muruqyada ayaa la burburiyaa, jidhkuna waa inuu ka shaqeeyaa sidii loo dhajin lahaa cudurrada murqaha iyo unugyada dhaawacmay isla markaa iyaga oo isla markaa ka dhigaya mid xoog badan iyo muruqyo ka badan intii hore. Ereyada fudud, DECA waxay bixisaa saameyn cajiib ah oo ah unugyo sumaysan oo borotiinka ah taas oo markaa ka caawisa inuu dhakhso u bogsado oo uu yeesho murqo badan. Taasi waxay sababtay, tani waxay ka dhigeysaa in steroid da'da dhabta ah ay aad u faa'iido badan tahay safarka qofkasta ee mustaqabalka.
Waxaad u baahan tahay maamulka DECA ee marar badan- Decawaa steroid kaliya oo leh hanti la sii daayo. Tan macnaheedu waa in marka la qaato, waxay ku jiri kartaa nidaamkaaga dhawr asbuuc. Qaybta ugu fiican ee tan ku saabsan tan waa inaadan marnaba inaad marwalba qaadato; Nabadgelyo si aad maalin walba u qaadatid daroogada!
Awoodda xoogga- Haddii aad rabto in aad hesho wax badan, waxaa muhiim ah in aad leedahay awood ku filan. Xoogga ayaa sidoo kale xoojiya heerarka tamartaada iyo hagaajinta niyaddaada. Waxaad awoodi kartaa; Sidaa darteed, tababar dheeraad ah iyo sidoo kale qaadashada waxqabadyada maalin kasta adiga oo aan aad u daalan oo caajis ah.
Muruqyada Fuller-Waxaad jeclaan doontaa muuqaalka muruqyada ee aad ku gaari doonto ka dib markaad qaadato Nandrolone Decanoate. Isku dar ah tababarka buuxa, Nandrolone ayaa kaa caawin doonta inaad ku guuleysato muruqyada xooggan ee aad mar walba dooneysay.
Hagaajinta waxqabadka guud- Waxay xoojisaa waxqabadka waxayna sii wanaajisaa gardarrada markaad ka shaqeyso. Dhammaan faa'iidooyinkaas oo dhan waa la isku daraa, waxaad hubtaa inaad ogaan doontoNandrolone Macaamiisha Decanoate oo dhan
Dib u eegista Nandrolone Decanoate (Deca Durabolin)
Weligaa ma yaabay sida kuwa muruqyada buuxa iyo kuwa wareegsan ee wargeysyada, warbaahinta bulshada iyo xitaa wadooyinka ay ku guuleysteen? Uma baahnid inaad su'aal waydiiso sida jeexjeexa ee dhacay. Waxaan ku siin doonaa dhab ah Dib u eegista Nandrolone Decanoate laga soo bilaabo dadka dhabta ah ee hore u isticmaalay oo waxay noqdaan noocyo jirdhis iyo jirdhis jidheed oo weyn iyagoo gaadhay jidhka oo ay ku fiicnaadeen.
Yuan ayaa yiri, "Waxaan hadda ku jiraa 30s aniga oo xiiso u leh inaan kor u qaado. Waxa aan dhihi karo waa in sheygani uu sameeyo khiyaamada. Tan iyo markii aan ka akhrisan oo ku saabsan online iyo amar ku saabsan, waxa uu ii shaqeeyay. Ma ahan mid niyad jabsan, oo ku saabsan yoolalka jidhkayga, waxaan dareemay horumar dhab ah. Hadda waxaan ahay qaab fiican iyo dareemid ka fiican. Anigu ma heli karo ku filan guulaha wanaagsan ee xabadka iyo muruqyada gacanta. Waxaan ku boorin lahaa qof kasta oo doonaya isbeddelka jirkooda inuu ku kalsoonaado natiijooyinka Nandrolone Decanoate. '
Cheng ayaa yiri "Inta badan noloshayda qaangaarka ah, waxaan ahaa tababare culus ee xanuunka iyo waxaan si kalsooni leh kuu sheegi karaa inuusan jirin steroid mid ka fiican tan. Waxaan shakhsi ahaan isku dayay labadoodaba, laakiin natiijada ka dhalata midkani waa mid u qalma lacagta kasta. Kadib markii ay labo bilood isdaba-qaadday, xooggaygu waa 20% ka sareeya. Inkastoo ay sii wadeen tababar iyo cunto isku mid ah sidii aan horay u sameeyay, tani waa waqtiga kaliya ee aan noqdey mid aan ku tiirsanaan iyo muruqyo badan. Lacag kale oo la mid ah DECA waa amniga; Dhakhtar ahaan, waxaan ku qasbanahay inaan sameeyo dadaal aan fiicneyn oo run ah, saameynteeda ayaa ah mid khafiif ah. Waa steroid ugu awoodda badan, waanan soo iibsan doonaa markale iyo mar kale! '
Saleh wuxuu yiri: "Aad ayaan u dooranayaa marka ay timaado wax kasta oo jidhkayga ku dhaco in daroogadani ay ka shaqeysay naftayda oo aan si fiican u jilicsan. Noloshayda oo dhan ayaa hoos u dhigtay noloshayda oo dhan sababtoo ah rabitaanka cuntada oo lumay, anigana waxaan go'aansaday in aan u leexiyo steroidkaan waxaana dhici karta in aan arko inaan heli doono hilibka qaar. Thanks to Nandrolone Decanoate sababtoo ah ka dib markii la raaco tilmaamaha oo dhan, waxa ugu dambeyntii bixisay off. Si daacadnimo ah, marnaba miisaanka ayaan haysan miisaankayga. Cunto-qabsigaygu aad ayuu u sarreeyaa, waxaanan hadda ku raaxaysan karaa saxan buuxa oo digaag ah oo aan la daboolin oo aan dareenka aheyn. Anigu weligay marnaba kuma guulaysan laheyn isticmaalka Durabolin. Mahadsanid.'
Yu wuxuu yiraahdaa "Ha u ogolaanin ereyga 'steroid khafiif ah' inay nacayaan in sheygani yahay lacag qashin ah. Waxa ay xirfaddayda jimicsiga ku qaadatay heer cusub oo ugu muhiimsanba waxay i siisay aniga oo ah cureyga aan ku riyooday. Waxaan tagay kulanno jimicsi shan jeer toddobaadkii, marnaba daal baan ahay. Marwalba waxaan dareemayaa awood aad u weyn oo ah in aan qabto caloosha, caloosha iyo lugaha isla maalintaas. Iyada oo daal aad u yar ka ah muruqyada ayaan awooday in aan ogaado in maqnaanshaha ay soo baxeen. Haddii aad qaadanayso steroid aan ka ahayn Deca Durabolin, markaa waxaad samaynaysaa dhammaan khalad.
Ironman wuxuu yidhi "Tani waa alaabo waxtar leh oo waxtar leh. Ka dib markii ay soo iibsanaysay iyada oo la soo jeedinayo saaxiibadayda jidhka ah, waxaan ogaaday in jirkayga iyo miisaankuba uu si isdaba joog ah u baddalay. Waxaan horey u soo qaatay dufan badan iyo sannadkii hore waxaan ahaa 220lbs leh 30% dufan jidhka ah. Muddo afartan cisho gudahood ah markaad isticmaashid dawadan iyo raacitaanka cunto yar oo yar, waxaan horay u lumay 17% dufanka jidhka. Waxaan isticmaali jiray hal mar toddobaadle, waxaanan kuu sheegi karaa in saameynada daawadu ay tahay mid la maamuli karo. '
Charles wuxuu yiri "Aad ayaan ugu kalsoonahay inaan ku guuleysan doono tartanka jirkayga jirka ah ee la qaban doono todobaadka soo socda. Jidhkaygu wuxuu noqdey mid murugo badan, mana sugi karo inaan marxaladdan soo galo todobaadka soo socda. '
Steven ayaa yiri "Dareenkayga ku jira jimicsiga iyo xoogga ayaa sarreeya ka dib afar todobaad oo isticmaalaya alaabtan mucjiso ah. Ma jiraan wax guuleysatay Deca Durabolin.
Nandrolone Decanoate (Deca Durabolin) ee iibka
Marka ay timaado tababarka iyo waxqabadka, dad badan ma ogaan karaan meesha iibso Nandrolone Decanoate. Wax kale oo laga yaabo in ay dad badani ka hadlaan waa halka ay ka iibsan karaan Nandrolone Decanoate online iyagoo aan la daba galin. Qaadashada lacag ah daroogada oo kaliya illaa mar dambe ogeysii in uu ahaa been ama mid wasakh ah ayaa noqon kara mid aad u nugul. Waxay u egtahay sida tuurista lacagta caddaanka ah. Iyadoo dad badan oo iibinaya Nandrolone Decanoate been abuur ah maanta, waxaa jira dhawr waddo oo sharci ah oo aad ka iibsan kartid foomka saafiga ah.
Haddii aad tahay qof daalan inuu iibsado daawo aan u adeegin ujeedada ama xiiseyneyso iibsashada tayada Deca Durabolin, markaa buyaas.com waa meesha ay tahay. Ma aha oo kaliya boggayaga ayaa kuugu ballanqaadaya niyadda nabada inta lagu jiro hannaanka wax iibsiga laakiin waxaad sidoo kale hubsan kartaa inaadan degi doonin qaybta isbitaalka sababtoo ah inaad qaadato suuq madow DECA.
Waxaan nahay shirkad Nandrolone Decanoate lagu kalsoon yahay, tayada alaabtayadu waa tan ugu sareysa ee aad ka heli karto suuqa. Aad ayaan u daneyneynaa arrimaha caafimaadka iyo badbaadada waligoodna ma sameyn karno tijaabooyin jirkaada ah. Intaa waxaa dheer, waxaan leenahay qiimaha ugu wanaagsan Nandrolone Decanoate taas oo ah mid ka jaban adoon iska bixin karin tayada.
Tan iyo markii la ogaado Nandrolone Decanoate supplier, waxaan ku dadaalnaa inaan hubino in macaamil kasta oo ku soo galo boggayaga aanu ku socon waqti adag oo nagu amraya. Nidaamkayaga wax iibsigu waa mid toos ah, oo dhanna waa inaad sameysid ugu horreyn inaad google ka raadiso buyaas.com. Si toos ah ayaa laguugu soo hagaajin doonaa boggayaga waxaana fiirin doonaa hoosta halkaas waxaad ka heli doontaa liiska waxyaabaha. Tag liistada liiska waxaadna riix 'alaabta'. Waxay ku hogaamin doontaa liiska alaabooyinka aan bixino, laakiin haddii aadan arki karin Nandrolone Decanoate ka mid ah liiska ku qoran bogga hore, waxaad riixi kartaa badhanka raadinta oo raadso alaabta aad doorbideyso.
Kadib markaad hesho oo aad gujiso, waxaad buuxin doontaa foom gaaban oo leh su'aalo yar si loo go'aamiyo u-qalmitaankaaga. Markaa waan kuu soo celin doonaa, waxaanan xaqiijinaynaa iibinta. Samee lacag bixinta adoo isticmaalaya siyaabaha ugu habboon ee haboon ee laga heli karo aaggaaga oo sidoo kale ku qoran boggayaga oo ka dibna sug in aad soo gudbiso alaabtaada muddada ugu gaaban. Looma baahna inaad ka welwelisid luminta xaafaddaada, waxaan isticmaalnaa shirkadaha qawaaniinta aaminka ah, waxaanad hubin kartaa in aad alaabtaada si deg deg ah iyo ammaan leh u heli doonto iyadoon wax khasaare ah geysan inta lagu jiro gaadiidka.
Waxyaabaha ugu fiican ee laga iibsan karo waa in aad ka iibsan kartid meel kasta oo aad haysatid alaabadaada adigoon u baahnayn inaad ka soo baxdo dhibaatada dukaanka si aad u dukaameysid. Waxay sidoo kale kaa caawin doontaa inaad ku badbaadiso dhowr bucks. Sidoo kale, qofku maahan inuu ogaado inaad qaadayso steroids. Kaliya adiga iyo waxaan ogaan karnaa waxa ku jira xirmada iyo qarsoodiga ka dambeeya jirkaaga quruxda badan. Ilaa iyo inta uu qalabkaagu yahay internetka, waxaad naga dalban kartaa oo aad heli kartaa Nandrolone Decanoate raaxada goobtaada.
Nandrolone Decanoate (Deca Durabolin) loogu talagalay jirka dhismaha
Haddii aad rabto inaad noqoto jir-dhiseyaal ama aad ka fekereysid inaad noqotid mid, laakiin aadan garaneynin tallaabada aad qaadanayso stero-staotic ayaa ku heshay. Sidoo kale, haddii aad jir dhiseysey, laakiin waxaad dareentaa sida jirkaaga uu ku dhuftay dabaq, ka dibna tani waa adiga. Ma dhahayo inaad halkaas u fariisan doonto oo ka rajeyneyso natiijooyinka, laakiin haddii si sax ah loo qaato cunto fiican iyo tababar tababar ah, Deca Durabolin waxay ku siin doontaa muruqyada oo dhan waxayna kordhisaa rabitaanka cuntadaada intaa aad ka filaneyso.
Waa maxay cuntada ugu fiican ee la qaato xilliga Nandrolone Decanoate Cycle? Si aad u hesho ugu badnaan Nandrolone Macaamiisha Decanoate, waa in aad isticmaashaa cuntooyinka ka caawiya jidhka ee sameynta murqaha. Cunnooyinka borotiinka ah sida caanaha, ukunta, kalluunka, digaaga, iyo hilibka ayaa ka caawin doona jidhka in la soo saaro unugyada murqaha. Waxaad sidoo kale cuni kartaa cuntooyin hodan ku ah dufanka cuntooyinka iyo kolestaroolka, sida, kalluunka dufanka leh waxay ka caawisaa kor u qaadista unugyada. Carbohydrateska adag ee fibreedka ah sida tamarta miraha ah, bran, qajaarka, iyo mooska ayaa ah doorasho weyn maxaa yeelay waxay ka caawiyaan dheefshiidka waxayna kaa caawinayaan inaad firfircoonaato.
Intaa waxaa dheer, biyaha waxay u dhaqmi doonaan sida dhexdhexaad ah ee gaadiidka nafaqooyinka si unugyada muruqyada. Uma baahnid inaad cabto webi; ugu badnaan toban litir oo biyo ah ayaa ku filan. Markaad ku dareyso cuntadaan adigaa Nandrolone Dib-u-hagaajinta jirka, waxaa laguu xaqiijinayaa inaad baakeysi ku jirto pounds oo ah nadiif ah oo aan loodin karin. Sababta tan sababtu waxay tahay sababtoo ah nafaqada waa arrin muhiim ah oo abuureysa jawi wanaagsan oo faa'iido weyn leh.
Raadi tababarka saxda ah ee ku habboon safarkaaga jidh-dhisida adoo isticmaalaya steroid-ka deca. Inkastoo duufaanta, waa inaad ka qayb qaadataa tababarka kordhiya xoogga. Tusaalooyinka tababarkani waa dipsyo, dhimasho, safo, kursi, iyo kumbuyuutar. Waxaad abuuri kartaa jadwal aad mar walba raaci kartid jimicsiga ama aad go'aansatid inaad guriga ka shaqaysid. Haddii aad dareento in tani ay kugu adagtahay, helitaanka tababaraha jirdhiska waxaa uu caawin karaa heshiis weyn. Maaha oo kaliya isaga / ayada ayaa idin baraya nafaqada iyo laylinta laakiin sidoo kale wuxuu kaa caawin doonaa inaad sameyso hadafyo la gaari karo.
Si aad u dareento fiicnaan oo aad u hesho jirka sida kuwa jirka aadka u jecel, waa inaad ka fekertaa qaadashada daawadan kor u qaadeysa. Mar dambe ma dareemi doontid inaad daalaneysid tababarka kaddib; waad shaqeyn kartaa maalinta oo dhan haddii aad rabto! Ku dalbo Nanoloyinkaaga Nandrolone maanta oo qaabeeya jidhkaaga sida aad u rabto inay u muuqato sida.
Anabolic Therapy ee daawada casriga ah, William N. Taylor. MD, bogga 75-120
Mukhaadaraadka, Madadaalada, iyo Waxqabadka Jirka, oo ay sameeyeen John A. Thomas, Page 27-30
Osteoporosis: Pathogenesis iyo Maareynta, oo ay sameeyeen RM Francis, bogga 101-130
Saaxiibow salaan, Waad ku mahadsan tahay xiisahaaga. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida loo dalbado alaabadayada, fadlan nagala soo xiriir emayl ahaan: [Email ilaaliyo] Mahadsanid iyo mahad-celin wanaagsan,
Me llamo José Luis tengo 47 años peso 85 kg soy de tecamachalco puebla, nunca he ateido esteroides, hago mucho ejercicio quiciera ateir algún esteroide que me recomiendan
Buenas. Soy principiane me gustaria saber toda la información y donde comprarlo.
Diego Felipe gualdron claros
Waxaannu kaliya siinnaa steroids budo cayriin, xirfad kuma lihin waxyaabaha la dhammeeyay. Haddii aad xiisaynayso budada cayriin, fadlan nagala soo xiriir: [Email ilaaliyo] Mahad badan! _ ^